A sị ka e kwuwe, obere kichin abụghị nsogbu - Ngwongwo - n'ike mmụọ nsọ
E kwuwerị, obere kichin abụghị nsogbu
Ọnwa Ise 29, 2020 Ọnwa Abụọ 16, 2021 admin Kichin nke oge a
Ọ bụghị onye ọ bụla nwere kichin buru ibu nke nwere ike ijide ihe niile dị mkpa ma ị ka nwere ohere ọzọ. Ọbụna obere kichin pụrụ iche na anyị ga-enye gị obere echiche banyere otu esi enwe ihe niile ịchọrọ na ya na otu esi echekwa efere na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Obere okpokoro nwere amara ya
Mmadu ole biri n’ulo gi? Ugboro ole ka ị na-anọdụ ala na tebụl? N'oge ụwa dị ugbu a, mmadụ enweghị oge iji rie. Okpokoro a kpochapụwo nwere ike idozi gị na kichin. Ọ na-ewe ọkara ohere na mberede ị na-agbanye na kichin. Chee echiche banyere okpokoro okirikiri maka mmadụ abụọ. Okpokoro ihunanya a laghachiri na ejiji. Ọ bụ obere, ezigbo maka obere kichin.
Etufula oghere na-enweghị isi. Nkịtị kichin kichin chọrọ ezigbo ohere. Tinye ego na kichin nke eji akwa akwa. Ọ ga-adaba kpọmkwem n'ime ime gị, ọ gaghị ewe ohere dị ukwuu, mana n'otu oge ahụ ọ ga-abụ naanị ihe dị mkpa ịchọrọ n'ezie.
Gini mere iji mee ka kichin dị ugbu a ma weta ihe ọhụrụ na ya? Open shelf dị nnọọ trendy, ha ga-mara mma gosi gị kichin na dum ohere. Kwesighi inwe ihe niile na shelf oghere. Hapụ ite, efere na ihe ndị ọzọ ka ájá dị n’elu shelf. Agbanyeghị, ịnwere ike ịhapụ ngwa nri ma ọ bụ iko.
Na-acha ọcha na agba
Anyị na-adịghị nnọọ na-eche nke kpochapụwo ọcha na agba. E nwere ọtụtụ ụdị ọcha na ahịa. Kedu maka vanilla, pearlescent, kenkowaputa ma ọ bụ matte na-acha ọcha na agba? Gaghị enwe ike ịhọrọ nke ziri ezi n’onwe gị. Anyị na-akwado iji agba ndị ọzọ mee oghere pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, ndị dị otú ahụ ụgbọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-akpọ gba ọtọ shades. Ha ga-optical saa mbara ohere na gị obere kichin agakwaghị iyi ka obere.
obere akụrụngwa kichin
Igbe igbe maka ime ụlọ gị